Xiriirka FA oo ganaaxay kooxaha Chelsea iyo Leicester City kadib gacan-ka hadal : Calanka.com
Xiriirka FA oo ganaaxay kooxaha Chelsea iyo Leicester City kadib gacan-ka hadal
Xiriirka kubadda cagta dalka England ee Football Associaton (FA) ayaa ganaax dul dhigay kooxaha Chelsea iyo Leicester City kuwaasoo jabiyay mid ka mid ah xeerarka anshaxa ee u yaalla kubadda cagta Ingiriiska.
Labada naadi ayaa lagu ganaaxay min 22,500 oo gini kaddib markii ay ciyaartoyda labada naadi iyo shaqaalaha tababarka ee labada koox dagaal ka dhex sameeyeen garoonka intii ay socotay ciyaartii labadooda ku dhex martay horyaalka Premier League 19-kii May ee sanadkan.
Jilaafo adag oo uu difaaca Leicester ee Ricardo Pereira ku sameeyay xiddiga Chelsea ee Ben Chilwell ayaa saldhig u ahaa dagaal kulmiyay 20 nin oo xiddigo iyo shaqaalaha tababarka isugu jiray.
Antonio Rudiger ayaa si kulul kaga fal-celiyay qaladkii uu Pereira ku sameeyay Chilwell, waxayna taasi keentay inuu kursiga keydka kasoo kaco Daniel Armartey si uu dagaal u siiyo difaaca Jarmalka ah, halkaas ayuuna ka bilawday dagaal daqiiqado qaatay oo aanan loo kala harin.
Bishii lasoo dhaafay ayaa labada naadi lagu soo oogay dacwo ka dhan inay jebiyeen qodobka E20.1 ee xeerka u yaalla xiriirka FA, waxaana haatan uu xiriirku sheegay tirada lacagta lagu ganaaxay Blues iyo Foxes.
Af-hayeen u hadlay xiriirka kubadda cagta England ayaa sheegay inay labada naadi qirteen jabinta xeerkaas, waxayna aqbaleen ganaax gaaray min 22,500 gini oo koox walba lagu ciqaabay inay bixiso.
Ciyaartan ayaa ka dhacday garoonka Stamdord Bridge iyadoo Chelsea ay dhiggeeda ku garaacday 2-1, waxaana natiijadaas ay bilaw u ahay inay kooxda Leicester lumiso booskeeda Champions League ee xilli ciyaareedka soo socda kaddib natiijooyinkii xigay ee ay kala heleen labada naadi dhammaadkii horyaalka.